Casharkii Xiriirka Dadweynaha Ee Aan Soo Baranay Markii Aan Dhigeyno Sheekadeena | Martech Zone
Casharkii Xiriirka Dadweynaha Waxaan Ka Baranay Markii Aan Dhigeyno Sheekadeena
Arbacada, Juun 1, 2016 Arbacada, Juun 1, 2016 Douglas Karr
Sanado kahor waxaan qoray qoraal ku saabsan makaanikada sida loo qoro garoobada aragtidayda ka daabicis ahaan. Mid ka mid ah waxyaabihii ugu dambeeyay ee aan ku xuso maqaalka waa in ay ahaato mid ku habboon dhagaystayaasheena. Waxaan sii mari doonaa tillaabo dheeri ah oo aan idhaahdaa, iyada oo dhammaan buuqa iyo waxyaalaha qashin-qubka ah ay jiraan, in ay jirto fursad aad u weyn oo wanaagsan oo loo yaqaan 'PR' oo ah in laga takhaluso qashinka oo aan ku soo saarno daabacaaddayada. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa sheeko.
Subax kasta, waxaan furaa sanduuqa sanduuqa, oo waxaa jira darsin robo-gaaga ah. Qaarkood waa uun qalabyada otomaatigga ee 'PR automation' oo iga xanaaqaya in ka badan iyo in ka badan. Qaarkood waa uun a nuqul iyo Jinka war-saxaafadeedyo iyada oo aan wax sharrax ah laga bixin sababta la ii dejinayo ama sababta ay dhagaystayaashaydu u doonayaan inay maqlaan wararka.
Kaliya boqolkiiba ama laba iyaga ka mid ah ayaa sheeko leh gabi ahaanba. Xaqiiqdii, waxaan inta badan hubiyaa shirkadaha aan ka aqriyey warsaxaafadeedka ka dibna aan ugu jawaabo qofka PR-ga ah aniga oo iska leh sida ay shirkaddoodu u caawinayso. Kaaga darane, kooxda PR marwalba diyaar uma ahan inay ka jawaabaan, waxayna qaataan maalmo si ay u helaan dhowr shaashadood, xigasho, iyo muuqaalka sheyga aniga. Sidee taasi macquul ku tahay?
Aan Joogno Mawqifyada
Waxaan leenahay sheeko si aan u dhigno!
Waxaan leenahay koox cajiib ah oo xiriirka bulshada ah, Dittoe PR. Inta badan waxaa jira qaar ka gunuunaca Indianapolis oo ah haddii aadan ka mid ahayn kuwa la soo xulay, waxaa laga yaabaa inaadan sameyn doonin wararka maxalliga ah. Way adag tahay in lala tartamo bogaggeenna ganacsi shirkadaha iibsanaya sarreynta ama maal-gelinta malaayiin doollar.
Sanadkii la soo dhaafey, waxaan si weyn u maal gashey a istuudiyaha Podcast waxaan ka dhignay bartamaha magaalada Indianapolis. Waxaan ku arki jirnay koritaan weyn asxaabteena Edge-ka Webka Raadiyaha laakiin waxaan ku wadnay meel ka baxsan Indy si aan u soo bandhigno bandhigyada. Waxaan u baahanahay meel ku habboon dhowr meelood oo badhtamaha magaalada ah si aan u keenno martidayada.
Dhismaha istuudiyaha ayaa shaqeeyay. Xaqiiqdii, martidii ugu horreysay ee aan ku hoyanno waxay ahayd xafiiska Duqa Indianapolis! Waxaan u maleynay inay tani tahay war layaableh:
We maalgeliyey oo ka dhistey istuudiyaha 'Podcast' magaalada hoose ee Indianapolis.
We ka dhistay istuudiyaha oo ahaa kii ugu horreeyay noociisa ee laga dhiso bartamaha magaalada Indianapolis.
We horey ugu lahaa xafiiska Duqa magaalada podcastkeena istudiyaha cusub.
Dittoe PR xoogaa gadaal ayaan u riixnay laakiin waxaan ku riixnay in kani uu yahay war ku wanaagsanaa dejinta warbaahinta maxalliga ah. Dittoe wuu ogaa waxa xiga… hamaanshada. Waxaa jira saddex cilladood garoonka sare above Waxaan rajaynayaa inaad aragto:
Waxaan, Waxaan, Waxaan
Garoonkayagu wuxuu ahaa mid nagu saabsan. Xaqiiqdii, waxaa jiray wax la taaban karo oo la joogo magaalada hoose laakiin wali waxay ahayd wax nagu saabsan. Kooxda Dittoe ayaa soo laabtay waxayna noo sheegeen inay tani tahay dhibaatada. Waxay sheegeen inay u baahan yihiin sheeko naga weyneed isla markaana nagala fal-geliyey wixii taasi ahayd.
Waxay fadhiisatay wajigayaga hortiisa waqtiga oo dhan… podcasting. Podcasting wuxuu ku qarxay caan ahaan ka dib markii uu ahaa warbaahin si caddaalad ah u nugul dhowr sano. Intaas oo kaliya maahan, laakiin ma nihin kuwii ugu horreeyay gobolka Indianapolis.
Darrin Snider wuxuu ahaa xirfadle Podcast ah oo laga aasaasay gobolka iyadoo leh muusigga muusikada maxaliga ah. Brad Shoemaker ayaa dhisay kii ugu horreeyay istuudiyaha loogu talagalay Indianapolis - istuudiyaha quruxda badan ee fiidiyowga iyo maqalka labadaba. Wuu sii wadaa inuu kala tashado horumarkayaga. Bill Caskey's Advanced Iibinta Podcast ayaa si aad ah ugu guuleysatay in loo soo qaado isku xirnaansho. Iyo darsin ama shirkado kale ayaa si weyn u maal gashanayey faallooyinka, oo ay ka mid yihiin Liiska Angie.
Hadda taasi waa sheeko, sax? Halkii aan ka noqon lahayn, annaga, annaga, sheekadu waxay ahayd dhaqdhaqaaqii 'podcasting' ee ka dhacayay gobolka! Dittoe ayaa qotomiyey sheekada isla markiiba waa la qabtay. Kaliya maahan in la soo qaado, waxay ku sameysay bogga hore koobkeyga dhoolla caddaynta!
Qaarkood waxay ku doodi karaan inaan tooshka la wadaagnay maqaalkaas. Hagaag, duh! Wadaagista tooshka si uun ma u yareysay warka istuudiyahayaga iyo awoodda aan ku hayno goobtaas? Maya. Taas caksigeeda, waxay noo aasaastay khabiir ku takhasusay baahinta barnaamijkeena.
Sheekadu WAA INAY KAGA WAYNAHAY
Dittoe PR wuxuu na baray cashar sidan u qiimo badan layligan. Aniguna madbacad ahaan, waa inaan ka xishoodo inaanan qaadanin dawadii aan u cunin jiray qof kasta oo xiriirka bulshada iga dhexeeyo. Sheekadu ma aha adiga ama aniga, ee waxay ku saabsan tahay saameynta ay ku leedahay dhageystayaasha. Markaad farsameyn karto sheeko kahadleysa sida aad u badaleyso daabacadaha 'dhagaystayaasha' nolosha, shaqada, dhaqaalaha, ciyaarta, iwm.… Waxaad iibin doontaa sheekada. Adiga maahan adiga.
Tags: timo kabayarehal abuur istuudiyaha zombiedarrin snydersidaas prgeeska raadiyaha webkaradio raadiyaha geesibjistuudiyaha Indianapolis podcastingindyintuneSuuqgeynta Suuqgeyntagaroonkaistuudiyaha Podcastprpr garoomadaxiriirka dadweynaha
8 Walxaha Naqshadeynta Booth Naqshad Ganacsi Oo Waxtar Leh